မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ လူပျိုကြီးတွေကို ဘာကြောင့် အခွင့်အရေးပိုပေးသင့်တာလဲ ? – Gentleman Magazine
မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ လူပြိုကွီးတှကေို ဘာကွောငျ့ အခှငျ့အရေးပိုပေးသငျ့တာလဲ ?
မိန်းကလေးအများစုက တစ်ကိုယ်တည်းဘ၀နဲ့ အကြာကြီးနေတဲ့ ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ဆုံဆည်းရရင် စိုးရိမ်စိတ်ပိုတတ်ပါတယ်။ တကယ်တေ့ အသက်အရွယ်တစ်ခုထိ အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို အုပ်စုနှစ်ခုခွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပထမတစ်စုက ငွေကြေးချမ်းသာမယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးဆက်ဆံရေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးမယ်၊ ပြီးတော့ ဒီအတိတ်ကနေ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအရရော ငွေရေးကြေးရေးအရပါ လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုယောင်္ကျားမျိုးတွေက ရည်းစားဟောင်းကို အချိန်အကြာကြီးထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ရတဲ့အတွက် လက်ရှိအချိန်မှာ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်နေရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ထပ်တွဲမယ့် မိန်းကလေးအတွက် စိတ်ကျေနပ်စရာမဖြစ်နိုင်တာက ပုံမှန်ပါပဲ။
ဒုတိယအုပ်စုထဲမှာတော့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ လက်မထပ်ဖူး၊ ချစ်သူရည်းစားမထားဖူးသေးတဲ့ လူပျိုကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့ ဒီအသက်အရွယ်ထိ အမြီးမပေါက်သေးတာ တစ်ခုခုမှားနေလို့လားလို့ ထင်ချင်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာနဲ့ အနာဂတ်ဘ၀အတွက် သူ့မှာ ဘယ်လိုသန္နဌာန်တွေရှိလဲဆိုတာကို သေချာလေ့လာကြည့်တာ မမှားပါဘူး။
ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွေနဲ့ ခွဲခြားလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် နှစ်မျိုးထပ်ခွဲလို့ ရပါသေးတယ်။ တစ်မျိုးကတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်အင်ပါယာကို တည်ထောင်နေချိန်မှာ ချစ်သူမိန်းကလေးကို အနားမှာရှိနေစေချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုယောင်္ကျားမျိုးက အသက်(၂၀)ကျော်၊ (၃၀)ကျော်လောက်မှာတင် အိမ်ထောင်ပြုတတ်ကြပြီး ခမ်းနားတဲ့ဘ၀ကြီးကို တူနှစ်ကိုယ်တဲအိုပျက်ကနေ စတင်တည်ဆောက်ချင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင်အင်ပါယာကို အရင်တည်ဆောက်ပြီးမှ ချစ်သူမိန်းကလေးကို တော်ဝင်နန်းထက်မှာ မိဖုရားအဖြစ်တင်မြှောက်နေရာပေးချင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ယောင်္ကျားနှစ်မျိုးစလုံးကို ဘယ်တစ်မျိုးက ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ရွေးချယ်သူရဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်သိပြီး လုံခြုံစိတ်ချတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီးသားကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒုတိယတစ်မျိုးက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
မိနျးကလေးအမြားစုက တဈကိုယျတညျးဘဝနဲ့ အကွာကွီးနတေဲ့ ယောင်ျကြားတှနေဲ့ ဆုံဆညျးရရငျ စိုးရိမျစိတျပိုတတျပါတယျ။ တကယျတေ့ အသကျအရှယျတဈခုထိ အိမျထောငျမရှိသေးတဲ့ ယောင်ျကြားတှကေို အုပျစုနှဈခုခှဲကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ပထမတဈစုက ငှကွေေးခမျြးသာမယျ၊ မိနျးမတဈယောကျယောကျနဲ့ အနကျရှိုငျးဆုံးဆကျဆံရေးတှေ ရှိခဲ့ဖူးမယျ၊ ပွီးတော့ ဒီအတိတျကနေ စိတျခံစားမှုပိုငျးဆိုငျရာအရရော ငှရေေးကွေးရေးအရပါ လှတျမွောကျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီလိုယောင်ျကြားမြိုးတှကေ ရညျးစားဟောငျးကို အခြိနျအကွာကွီးထောကျပံ့ကူညီခဲ့ရတဲ့အတှကျ လကျရှိအခြိနျမှာ ငှကွေေးအကပျြအတညျးနဲ့လညျး ရငျဆိုငျနရေနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နောကျထပျတှဲမယျ့ မိနျးကလေးအတှကျ စိတျကနြေပျစရာမဖွဈနိုငျတာက ပုံမှနျပါပဲ။
ဒုတိယအုပျစုထဲမှာတော့ တဈကွိမျတဈခါမှ လကျမထပျဖူး၊ ခဈြသူရညျးစားမထားဖူးသေးတဲ့ လူပြိုကွီးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ရုတျတရကျဆိုရငျတော့ ဒီအသကျအရှယျထိ အမွီးမပေါကျသေးတာ တဈခုခုမှားနလေို့လားလို့ ထငျခငျြစရာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဘယျလိုလူမြိုးလဲဆိုတာနဲ့ အနာဂတျဘဝအတှကျ သူ့မှာ ဘယျလိုသန်နဌာနျတှရှေိလဲဆိုတာကို သခြောလလေ့ာကွညျ့တာ မမှားပါဘူး။
ယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအဆငျ့တှနေဲ့ ခှဲခွားလလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ နှဈမြိုးထပျခှဲလို့ ရပါသေးတယျ။ တဈမြိုးကတော့ သူ့ကိုယျပိုငျအငျပါယာကို တညျထောငျနခြေိနျမှာ ခဈြသူမိနျးကလေးကို အနားမှာရှိနစေခေငျြတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီလိုယောင်ျကြားမြိုးက အသကျ(၂၀)ကြျော၊ (၃၀)ကြျောလောကျမှာတငျ အိမျထောငျပွုတတျကွပွီး ခမျးနားတဲ့ဘ၀ကွီးကို တူနှဈကိုယျတဲအိုပကျြကနေ စတငျတညျဆောကျခငျြသူတှဖွေဈပါတယျ။
နောကျတဈမြိုးကတော့ သူ့ကိုယျပိုငျအငျပါယာကို အရငျတညျဆောကျပွီးမှ ခဈြသူမိနျးကလေးကို တျောဝငျနနျးထကျမှာ မိဖုရားအဖွဈတငျမွှောကျနရောပေးခငျြသူဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ယောင်ျကြားနှဈမြိုးစလုံးကို ဘယျတဈမြိုးက ကောငျးတယျဆိုးတယျလို့ ပွောလို့မရပါဘူး။ ရှေးခယျြသူရဲ့ စိတျဆန်ဒနဲ့အမြားကွီး သကျဆိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျဘာလဲဆိုတာကို ကိုယျတိုငျသိပွီး လုံခွုံစိတျခတြညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့ ဘဝတဈခုကို တညျဆောကျပွီးသားကို လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒုတိယတဈမြိုးက အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။
Previous: လူချစ်လူခင်များစေနိုင်သည့် အမူအကျင့်များ
Next: စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိထားရမည့်အချက်(၇)ခု